Isu Lethu Lokwenza Okuhamba Phambili Kwe-imeyili Elake | Martech Zone
Isu Lethu Lokwenza Okuhamba Phambili le-imeyili
NgeSonto, ngoFebhuwari 21, 2016 NgoMsombuluko, Februwari 22, 2016 Douglas Karr
My ukumaketha i-podcast uzakwethu, u-Erin Sparks, uthanda ukunginika isikhathi esinzima mayelana necebo lethu lokungena Martech Zone. Ngaphambi kokuthi sikhulume ngalokho esikuhlolile nokuthi yini esebenzayo, kufanele ngichaze ukubaluleka kwe-imeyili. Ukube ububheka ukushicilelwa okuku-inthanethi njengomshini, ukuthwebula amakheli e-imeyili - kude kakhulu - indlela esebenza kahle kakhulu zokubuyisa izivakashi ezifanele kusayithi lakho.
Eqinisweni, ngizoya lapho ngithi uhlu lwakho lwamakheli e-imeyili luyisu elibucayi kakhulu futhi elizwakalayo isayithi lakho elingaba nalo. Kungakho sakhe i- isevisi ye-imeyili ye-WordPress. Isizinda sababhalisi esikhulayo esizeni sakho yi- imethrikhi engcono kakhulu yokwazi impilo nokuzibandakanya kokuqukethwe kwakho. Lapho isivakashi sibhalisa futhi sikwamukela ebhokisini labo lokungenayo (okungenzeka ukuthi selivele ligcwele), kusho ukuthi bayalithemba inani elethwa yinhlangano yakho.
Kwethulwa i-Welcome Mat
Sivivinye ithuluzi lamathuluzi ahlukene ukuzama thatha amakheli e-imeyili ezivakashi zethu encwadini yethu yezindaba - kodwa kuze kube manje, munye kuphela osebenze kahle. Impela sithola ukugcwala kwamakheli e-imeyili lapha nalaphaya ngamathuluzi esiwasebenzisayo. Futhi sigwema ngobuqotho amaqhinga wokuheha izivakashi ukuthi zibhalise njengama-sweepstake nama-giveaways. Sifuna ababhalisile bangempela ababhalisile ngoba bayalibona inani esibalethela lona. Iphepha lethu lezindaba lihlala linikela ngokuqukethwe okuhlukahlukene kwabathengisi nabamaketha ukuze bacwaninge, bathole futhi bafunde ukusebenzisa ubuchwepheshe bokumaketha ukwenza ngcono imiphumela yebhizinisi.
A wamukelekile mat luhlaka oluphelele lwekhasi oluvela kubavakashi abasha, lucindezela isayithi phansi kwekhasi, bese licela isivakashi ukuthi sibhalise. Esizeni sethu, kubukeka kanjena:
Ayisebenzi nje, isebenza kahle ngokumangazayo. Ngenkathi amanye amasu ezositholela ababhalisile abayishumi nambili ngenyanga, i-Welcome Mat yethu isitholela ababhalisile abambalwa every single day. Eqinisweni, ngolunye usuku saba nababhalisile abangaphezu kwe-100. I-Welcome Mat yethu iguqula ngaphezu kokuphindwe izikhathi eziyi-100 kunanoma yiliphi elinye isu esilihambisile.
Ngokungafani ne-popup ephazamisa umuntu ngemuva kokuqala ukufunda, le ndlela ibacela ukuthi babhalise ngaphambi kokuthi baqale. Uma bengafuni, bavele bathi cha noma baskrolele phansi ekhasini. Ipulatifomu isinikeza nethuba lokubambezeleka ukukhombisa ukungena futhi. Futhi singahlola izinhlobo ezahlukahlukene ngethuluzi lamathuluzi elithuthukisiwe ukubona ukuthi ngabe enye isebenza kangcono kunenye.
Khulisa Iwebhusayithi Yakho Kuholele ngeSumoMe
The Siyakwamukela Mat kungenye yamathuluzi amaningi asebenzayo futhi asebenzayo ukukhulisa amazinga akho wokuguqulwa kwewebhusayithi. SumoMe Amathuluzi omgwaqo manje afakiwe futhi amisiwe kumawebhusayithi angaphezu kuka-200,000! Ngaphezu kwakho konke - ipulatifomu inikela ngamathuluzi angaphezu kweshumi nambili ukukusiza ukushayela ukuguqulwa nokwandisa ukusebenza kwesayithi lakho.
Uma usebenzisa isiza seWordPress, iSumoMe iphinde inikeze nge-WordPress Plugin ukuze ikuqalise kalula. I-SumoMe futhi ine-plugin ye-Chrome, eyenza ukufinyelela kuthuluzi labo kube lula njengokuchofoza inkinobho. Okuhle kunakho konke, bahlala bengeza izindlela ezintsha zokukhulisa uhlu lwakho lwe-imeyili, ukukhuthaza ukwabelana komphakathi, nokukala ukusebenza kwesayithi lakho ngokusebenzisa kwabo analytics amathuluzi.
Sisebenzisane ne-SumoMe ukukuqalisa - bhalisa manje ukufinyelela amathuluzi ayishumi nambili ku- mahhala!
Zama i-SumoMe MAHHALA!
10 Amamethrikhi Wokulandela Nge-imeyili Kufanele Uqaphe
Ukukhishwa kweBigCommerce Izihloko ezingama-67 ze-E-commerce ezintsha
Mthokozisi (@ mthokozisi91)
Feb 22, 2016 ngo-9: 15 AM
Umsebenzi omuhle uDouglas. Ngichofoze isixhumanisi ku-Twitter futhi ngangiqiniseka ngokwanele ukuthi ngibingelelwe umata owemukelekayo owabhala ngawo. Akungeni endleleni yokuqukethwe engikukho ukuze ngikubone kodwa kusabonakala kakhulu.
Angizange ngifake ikheli lami le-imeyili, kepha mhlawumbe uzongithola ngokuzayo 😉
Feb 22, 2016 ngo-9: 39 AM
Ngabe u-A / B uvivinye isikrini sokuthwebula esiholayo lapho umsebenzisi eshiya iwebhusayithi? (isikrini esigcwele njenge- "Welcome Mat" sizoba "Bye-bye Mat" ngokwesibonelo 😉)
Isizathu angiboni ukuthi kungani umsebenzisi, efika kuwebhusayithi yakho okokuqala ngqa ukuze afunde okuthunyelwe, angazibeka engcupheni “yokulahlekelwa” ithuba lokufunda lokho okuthunyelwe ngokunikeza ikheli lakhe le-imeyili khona manjalo (futhi okungenzeka aqondiswe kokunye ikhasi) ngaphandle kokufunda kuqala okuthunyelwe uqobo ukwazi ukuthi ikhwalithi yalo ibaluleke ngempela ukushiya ikheli layo le-imeyili…
Uma ngabe wenze lokho kuhlolwa kwe-A / B phambilini, uchaza kanjani ukuthi abantu bangahle bazimisele ukushiya ikheli labo le-imeyili ngaphambi kokufunda okuqukethwe kwakho ngemuva kokufunda okuqukethwe kwakho?
Feb 22, 2016 ngo-4: 39 PM
Kuyathakazelisa, uToni. Angiyena uchwepheshe ekwakhiweni kwewebhu nganoma iyiphi indlela. Ungakwenza kanjani lokho uma beshiya isiza? Nge-pop-up lapho bachofoza u- "x"?
Feb 23, 2016 ngo-3: 45 PM
Sawubona Dean, iqhinga elisetshenzisiwe liyabizwa Inhloso yokuphuma, ngumbhalo uqobo obheka isivinini sesikhombi segundane nesiqondiso. Njengoba umuntu ehlohla igundane elibhekisa kubha yekheli noma kunkinobho yangemuva, kwenziwa okuzivelelayo.